Practice / Learn
Useful Links for Nepal Driving License
Nepal Driving License Online Registration Form
Nepal Government Department of Transport Management
लाईसेन्स थप गर्नु परेमा
४ चक्के सवारी साधन
how to obtain Driving
license in Nepal?
परीक्षा दिएको कति दिनमा परीक्षाफल प्रकाशित हुन्छ?
उत्तर पुस्तिकाहरु परीक्षण तथा रुजु पश्चात् प्राप्त नतिजाको आधारमा परिक्षा समितिले कम्तिमा ६० प्रतिशत अङ्क प्राप्त गर्ने परीक्षार्थीलाई उत्तिर्ण मानी सामान्यतया परीक्षाको भोलीपल्ट परिक्षार्थीहरुको रोल नं. क्रमानुसार नतिजा प्रकाशित गरी कार्यालयको सूचनापाटीमा टाँस गरिन्छ ।
License Exam License Exam
लाईसेन्स को परीक्षाफल प्रकाशित भए नभएको कुन वेबसाईट मा चेक गर्न सकिन्छ?
यो एउटा एप मात्रै हो, परीक्षाफल यहाँ प्रकाशित हुदैन।
लाईसेन्स निकाल्नको लागी के के गर्नु पर्छ?
लाईसेन्स निकाल्न को लागि सम्बन्धित यातायात व्यव्स्थापान कार्यालयमा गइ फ्रेश पासपोर्ट साइजको फोटो,तोकिएको दस्तुर ,नेपाल सरकारले निरोगितको लागि दिएको प्रमानपत्र ,नागरिकताको प्रतिलिपी लिइ फर्म भरेर रु १० को टिकेक टासी फर्म भरी बुजौनु पर्दछ ।
लिखित परीक्षा महिनाको कति पल्ट हुन्छ र कहिले कहिले हुन्छ? ( ट्रायल कहिले हुन्छ)
लिखित परीक्षा फर्म बुजाएको भोलिपल्ट हुन्छ।सनिबार र सरकरी बिदा परेको दिन हुदैन।
लिखीत परीक्षा दिनको लागी कता जानु पर्ने हो?
लिखित परिक्ष्या दिनको लागि ख जाने वने फोरम बुजैसकेको मैल प्राप्त हुन्छ; लिखित को लागि कहाँ जाने भने कुरा मेलमा नै खुलौएको हुन्छ।
लिखीत परीक्षामा फेल अथवा अनुपस्थित भए पछी अर्को परीक्षाको लागी कति दिन कुर्नु पर्छ?
लिखित फेल भएमा अथवा लिखित परिक्षामा अनुउपस्थित भएमा तीन महिना पछी पुना फर्म भरेर बुजाउनु पाईन्छ।
लिखित परीक्षा दिन जाने समय कति बेला हो?
लिखित परिक्षा बिहान ७ बजे बाट सुरु हुन्छ ।
फेल भएपछी फेरी परीक्षा दिन के के गर्नु पर्ने हुन्छ?
Question model चेन्ज हुन लागेको हो?
Question model चेन्ज भएको हो जम्मा २० ओटा प्रस्नहरु हुन्छन जसमा १० ओटा अनिवार्य मिलाउनु पर्छ।
लिखितमा सोधीने प्रश्न दुबै २ चक्के र ४ चक्के सँग सम्बन्धीत हुन्छ?
लिखितमा दुवै ४ व्हेल्लेर्स र २ व्हेल्लेर्स दुवै बाट सोधिन्छ
लिखित परीक्षाको फर्म कहिले कहिले भर्न पाईन्छ?
लिखित परीक्षाको फर्म सनिबार र सार्वजनिक विदा बाहेक जैले पइन्छ।स्कूटर हो भने आइतबार भर्नु पर्छ।
लिखित परीक्षाको अन्लाईन फर्म कता पाईन्छ?
www.dotm.gov.np वेबसाइटमा पाइन्छ।
फर्म भर्दा र बुजौदा आवस्यक पर्ने कागजातहरु के के हुन?
फर्म भर्दा आवस्यक पर्ने कागजातहरु निम्न प्रकारका छन्:
आफूले चलाउन चाहेको सवारीको सम्बन्धमा विभागबाट मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण केन्द्रबाट प्राप्त प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि हालसालै खिचिएको तीनप्रति पासपोर्ट र्साईजको फोटो । निरोगिताको सम्बन्धमा नेपाल सरकारद्वारा मान्यताप्राप्त चिकित्सकले नियमावलीको अनुसूची-१८ बमोजिमको ढाँचामा प्रमाणित गरेको निरोगिताको प्रमाणपत्र । चालक अनुमतिपत्रको दरखास्त दस्तुर बुझाएको निस्सा ।
सवारी चालक अनुमतिपत्र दरखास्त दस्तुर वापत रु २००/- (ठूला सवारी¸ मझौला सवारी¸ र साना सवारी सवैकालागी) बुझाई सो को सक्कल भौचर दरखास्त साथ पेश गर्नुपर्नेछ ।
फर्म भर्दा कति शुल्क तिर्नु पर्ने हुन्छ?
फर्ममा लेखिएको professional and non professional भन्नाले के बुझिन्छ?
Professional भन्नाले केहि उदेश्यको लागि लिन्छ जस्तै ड्रआभरहरुले बस चलाउनको लागि वा निश्चित पेसाको लागि लिएको लाईसेन्से बुझिन्छ.
Non professional licence लाई professional licence बनाउन के गर्नु पर्छ?
Non professional licence लाई professional licence बनाउन कुनै प्रक्रिया छैन।
Online registration काठ्मान्डौको लागी मात्रै हो वा देशभर को लागी?
Online registration काठ्मान्डौको लागी मात्रै हो.
अन्लाईन फर्म बुझाएपछी ई-मेल प्राप्त नभएमा के गर्ने?
अन्लाईन फर्म बुझाएपछी ई-मेल प्राप्त हुन्छ येदि नभएमा सम्बन्धित यातयात विभागमा सम्पर्क गर्ने।
फर्ममा सोधिएको सब जानकारी दिनु अनिवार्य नै हो?
फर्ममा सोधिएको सब जानकारी दिनु अनिवार्य होइन तर सबै कुरा खुलौदा राम्रो हुन्छ। online बुजौदा **** सिन्ग्नल चाही अनिवार्य रुपमा भर्नु पर्दछ।
फर्म भरेपछी प्राप्त ई-मेलमा उपस्थित हुनुपर्ने मितीमा सार्वजनिक बिदा परेमा के गर्ने?
बिदाको भोलिपल्ट जाने वा सम्बन्धित यातयात विभागमा सम्पर्क गर्ने।
फर्म भरेको लगभग कति दिनपछी लिखित र ट्रायल हुने गर्दछ?
फर्म भरेको लगभग भोलिपल्ट लिखित हुन्छ.ट्रायलको लागि पनि रसिद मा मिति लेखिदिएको हुन्छ सोहि दिन उपस्थित भै ट्रायल दिनु पर्छ
एक दिनमा कति वटा सम्म फर्म accept हुन्छ?
ONLINE एक दिनमा ५०० ओटा हुन्छ र online नाबुजौने हो भने निश्चित कोटा हुन्छ
देशभरीको कुन कुन परिक्षा केन्द्रको लागी अनलाईन फर्म भर्न पाईन्छ?
फर्ममा भरेको details mistake भएमा के गर्ने?
सकेसम्म कुनै गल्ति नगर्ने र गल्ति भएमा गल्ति सच्याई फर्म भर्नु पर्दछ
कुन कुन सवारी साधनको (scooter specially) फर्म कुन कुन बार भर्न पाईन्छ?
फर्म बुझाउन तोकिएकै दिनमा जानु पर्ने हुन्छ कि जहिले जादा पनि हुन्छ?
फर्म बुझाउन तोकिएकै दिनमा जानु नै उपयुक्त हुन्छ।
अन्लाईन फर्म देशभरको परीक्षा केन्द्रको लागी उपलब्ध हो कि राजधानीको लागी मात्रै हो?
Bagmati zoneलागी मात्रै हो
अन्लाईन फर्म compulsary बनाईएको हो चैत्र १ देखि?
अन्लाईन फारम भर्दा कुन समयमा भर्नु पर्छ?
एक दिनमा ५०० वटा मात्रै अनलाईन आवेदन स्विकार गरिन्छ। त्यसैले first hour मै फारम भर्नु उपयुक्त हुन्छ।
लाईसेन्स परीक्षा नेपाली बाहेको अरु कुनै भाषामा दिन पाईन्छ कि पाईदैन? पाईन्छ भने कुन कुन भाषामा पाईन्छ?
लाईसेन्स परीक्षा नेपाली बाहेको अरु कुनै भाषामा दिन पाइदैन।
ट्रायल पास भएको कति दिनमा लाईसेन्स पाईन्छ?
राजस्व तिरेको २ महिना जतिमा पाइने वेवस्था छ तर धेरै चाप हुने भएकाले केहि समय लाग्न पनि सक्छ।
ट्रायल दिनको लागी कता जानु पर्ने हो?
भक्तपुर ठुलो भर्यांग सुकेधारामा मिनभवन आफुलाई जुन ठाउँ नजिक र सजिलो हुन्छ त्यहि जानु राम्रो हुन्छ।
एक (दुई) पल्ट ट्रायल फेल भएको कति दिनमा फेरी ट्रायल दिन पाईन्छ?
कुन सवारी साधनको ट्रायल कता कता हुन्छ?
२ पांग्रेको लागि जानु पर्छ भने ४ पन्ग्रेको लागि बगी खाना जनुपर्च।
कुन सवारी साधनको ट्रायल कुन वार हुन्छ?
मोटरसाईकलको ट्रायल अहिले चेन्ज भएको हो?
मोटरसाईकलको ट्रायल अहिले चेन्ज भएको छ
8 shape को length र breadth कति कति हुन्छ?
के के गर्नु पर्छ? (procedure)
एक पल्ट फेल भएमा कति दिन पछी ट्रायल दिन पाईन्छ?
फेरी फर्म भर्नु पर्छ?
भर्नु पर्दैन एकचोटी लिखित पास भएपछि ३ पटक सम्म त्रिल दिन मिल्छ
रिट्रायलको लागी पहिलो पल्ट फेल भएको एक हप्ता नपुग्दै जान पाईन्छ?
के के कागजपत्र बोकेर जानु पर्छ?
एकान्तकुनाबाट ट्रायल फेल भएको ब्यक्तीले रि-ट्रायलको लागी भक्तपुरबाट राजस्व तिर्न मिलछ कि मिल्दैन?
स्कुटर, मोटरसाईकल, गाडी को लागी कति कति हुन्छ?
Four Wheeler4Wheeler
© Nepal Driving License. A product of makuracreations